६ खाना जसले क्यान्सर निम्त्याउँछ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ४ बैशाख २०७६, बुधबार १८:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । बजारमा पाइने जंक फुड अर्थात् फास्ट फुड क्यान्सर निम्त्याउने महत्वपूर्ण कारक हुन् भन्ने तथ्य बेलाबेलामा सार्वजनिक भइनै रहन्छन् । प्याकेटमा राखिएका खानामा प्रयोग हुने अवयवहरुले प्रारम्भिकरुपमा क्यान्सर निम्त्याउन सहयोग गर्ने तथ्य समेत फेला परेका छन् । तर पनि व्यस्त शहरमा जंक फुडको खपत गर्नेहरुको जमात बढ्दो छ । हामीले सामान्यरुपमा खाइरहने जंक फुड मध्ये क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोग निम्त्याउन सक्ने ६ खाना यस्ता छन् ।
सामान्यतया हामी सोडा खाइरहन्छौं । प्लास्टिकको बोतलमा प्याक गरिएको सोडामा क्यान्सर निम्त्याउने क्यारमल कलर मिसाइएको हुन्छ । पानीमा कृतिम कलर राखेर तयार पारिने सोडाले मान्छेमा क्यान्सर निम्त्याउने अनुसन्धानले देखाएको छ । कृतिम रंग निकाल्नको लागि प्रयोग गरिने कार्सियोजेनिक केमिकलले क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ ।
विकल्पः मानव स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा किफायती पानी नै हो । यदि गुलियो बढिनै मन पर्छ भने पानीजस्तै देखिने सोडाको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
२.ग्रिल्ड अर्थात् पोलेको रातो मासु
सिन्कामा उनेर पोलेको मासुको छुट्टै मिठो स्वाद आउँछ । यसरी मासु पाक्न निकै उच्च तापक्रमको प्रयोग हुने भएकाले त्यसले क्यान्सर निम्त्याउने हाइड्रोकार्वनको उत्सर्जन गर्छ । रातो मासुको अधिक मात्रामा खाँदा त्यसले क्यान्सर निम्त्याउन सक्छ ।
विकल्पः रातो मासु कम खाने, सजगता अपनाएर पकाउने ।
३. माइक्रोवेभ पपकर्न (फुराएका मकै)
बटर फ्ल्याभरको पपकर्न धेरैजसो व्यक्तिको रोजाइमा पर्छ । बटर फ्ल्याभर राखेर पप कर्न पकाउँदा उत्सर्जन हुने टक्सिन र कार्सियोजेनिक केमिकलले क्यान्सर निम्त्याउँछ ।
विकल्पः माइक्रोवेभमा तयार पारिएको पपकर्नको खपत नगर्ने र अर्गानिक मकै किनेर आफ्नै चुलोमा फुराएर खाने ।
४. क्यानमा प्याक गरिएको खाना, विशेषगरी टमाटर
क्यानमा प्याक गरिएका सबै खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् । विशेषगरी क्यानमा प्याक गरिएका टमाटर खाँदा त्यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउँछ । सामान्यतया टमाटर खपत स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ ।
विकल्पः क्यानमा प्याक गरिएको टमाटर प्रयोग नगर्ने, ताजा टमाटरको प्रयोग गर्ने ।
५.गैर जैविक फलफुल तथा सागपात
आफैमा फलफुल सागपात मानव स्वास्थ्यमा किफायती हुन्छन् । तर फलफुलमा प्रयोग गरिने विभिन्न विषादीले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउँछ ।
विकल्पः सकभर अर्गानिक अर्थात् जैविक फलफुल खाने, जैविक फलफुल खान सम्भव नभए गैर जैविक फलफुल पनि राम्रोसँग पखालेर मात्र खाने ।
६. प्रशोधित मासु
प्रशोधित मासुमा धेरै जसोले रुचिपूर्वक खाने ससेजलगायतका मासुका परिकारहरु पर्छन् । यस्तो मासु आवश्यकता अनुसार फ्राइ गरेर सहज रुपमा खान मिल्छ । तर यसले स्वास्थ्यमा ल्याउने समस्या भने निकै गम्भीर हुन्छ । यस्तो मासु प्रशोधनका क्रममा अधिक मात्रामा नुन, डरलाग्दा केमिकलको प्रयोग हुन्छ । हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने यस्ता मासुका परिकारले अन्ततः प्राणघातक क्यान्सर निम्त्याउछन् ।
विकल्पः सकभर फ्रेस र अर्गानिक मासुको खाने, कम प्रशोधित मासुको पहिचान गरी कहिलेकाँही मात्र खाने ।
(एजेन्सीको सहयोगमा जोसेफ शाहीले तयार पारेको सामाग्री)
हावाहुरी र पानीले धादिङमा करोडौं मूल्य बराबरको इँटा नोक्सान
धादिङ । माघ महिनादेखि परिरहेको पटकपटकको झरीले पृथ्वीराजमार्ग वरपर सञ्चालित इँटा भट्टा उद्योगले करोडौंको नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।…
माधव नेपालले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउँ भन्न नपाउने ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रदेश कमिटीको घोषणासँगै विवाद शुरु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री…
देउवाबाट नेतृत्व खोस्न कोइराला परिवाको यस्तो रणनिति
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसभित्र पार्टी बलशाली बनाउने बहस चलिरहँदा कोइराला परिवारका सदस्यको रणनीति र सक्रियताबारे सबैमा चासो देखिन…
सुन तस्करीमा संलग्न जनप्रतिनिधि जोगाउने दाउमा प्रहरी
काठमाडाैं । सिराहको गोलबजार, ९ धुर्मीखोला नजिकबाट तस्करीक पौने दुई किलो सुन बरामद गरेके सशस्त्र प्रहरीले केही अभियुक्त उम्काउन…
कलंकी र गौशालामा टिकट काउन्टर निषेध
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न कलंकी चोक र त्यसको आसपास तथा गौशाला चोक र त्यसको आसपास…
काठमाडौं । प्रहरीले ५४ ग्राम ब्राउन सुगर सहित नेपाली सेनाका मेजरलाई पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको…
अमेरिकाबाट नेपाल आएर रामप्रसाद खनालले गाए पञ्चेबाजाको मन छुने गीत, रिलिज भयो दुलाहा दुलहीको भिडियो ! 215 views
भूकम्प आउँछ भनेर आतंक फैलाउने ‘ज्योतिष’ छुटे 22 views
गर्मीले बसभित्रै ४ जनाको मृत्यु 10 views